DAROOGADA "SAAMEYN DHOOSAADKA LABAAD": TILMAAMAHA ISTICMAALKA CAYAYAANKA - SOOSAARKA DALAGGA
Habka loo isticmaalo cayayaanka "Saamaynta Dareemka Labaad"
Maanta suuqa waxa aad ka iibsan kartaa tiro badan oo ah qalab kala duwan oo kaa caawin kara dagaalka lagula jiro cayayaanka.
Sababtan darted, ninkii beerta hareerihiisa ah wuu wareeri karaa, natiijadaasna ma heleyso natiijada la rabay.
Fiisooyinka Fikradaha ah waxay soo saaraan Cayayaanka Isku-darka ah ee Iskra-kicida, kaas oo, fikirkooda, waxay muujinayaan natiijooyin wanaagsan.
Aan aragno daaweyntan oo dhaw oo aan go'aan ka gaarno haddii ay ku habboon tahay xalinta dhibaatadeena.
Habka firfircoon iyo foomka sii deynta
Diyaarinta "Saameynta Dhoofka Labaad", maaddooyinka firfircooni waa cypermethrin xaddiga 21 g / kg iyo permethrin ee qiyaasta 9 g / kg. Ku sii daa daawada kiniiniga, mid kasta oo miisaankiisu yahay 10 g.
Waa muhiim! Maanta waa daroogada kaliya ee leh saameyn labanlaab ah. Iyadoo aanad ka takhalusi karin tiro badan oo cayayaanka xayawaanka ah, laakiin sidoo kale waxay ka caawiyaan dhirta si dhakhso ah uga soo kabashada dhaawaca sababtoo ah joogitaanka bacriminta potash.
Taasoo ah mid waxtarka leh
"Sparkle Double Effect" waxaa loo adeegsadaa oo keliya ma aha oo laga yaabo aphids, laakiin sidoo kale cayayaanka dalagga kale, sida aboorka, aboorka, caleemaha Colorado, baradho ubax, caleemaha ubax, caleenta basasha, duudduubka basasha iyo cayayaanka kale ee cuno caleemaha dhirta.
Duufka waxaa loo isticmaali karaa daawooyinka kale ee alkolada ah, sida cayayaanka ama fungicides.
Ma taqaanaa? Cilmi-baadhayaashu waxay aaminsan yihiin in sunta cayayaanka ay u muuqatay isla markiiba ka dib markii ay bilaabantay dhul beerashada ku dhowaad 10 kun oo sano ka hor. Mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee kugula talin kara isticmaalka noocaan oo kale ah Aristotle, oo ku tilmaamay saameynta baaruudda injirta.
Diyaarinta xalinta shaqada iyo habka codsiga
Xalku waa inuu noqdaa mid cusub. Xalka hawsha waxaa loo diyaariyaa adoo burinaya 1 kiniin ah 10 litir oo biyo ah. Waxaa lagula talinayaa in marka hore la yareeyo badeecada qadar yar oo ah dareere ah kadibna kaddib marka la dhamaystiro dhamaystirka biyaha si loogu cabiro mugga loo baahan yahay. "Saameyn Dhoosle ah" ayaa leh tilmaamo loogu talagalay isticmaalka, kaas oo la dhigay sicirka codsiga:
Geedaha waxaa lagu daweeyaa inta lagu jiro xilliga sii kordhaya. Iyadoo ku xiran xajmiga, xaddiga xalka wuxuu u dhexeeyaa 2 ilaa 10 litir oo karoon.
Currants, raspberries iyo strawberries ayaa la waraabiyey ka hor ubax iyo goosashada ka dib. Qalabka isku dhafan ee 10 mitir oo laba jibbaaran. m beeritaanka 1.5 litir oo xal ah.
Baradhada, karootada, xididdo iyo digir ayaa lagu buufiyaa inta lagu jiro xilli sii kordhaya. Inta badan 10 mitir oo laba jibbaaran. m ku filan 1 litir oo xal ah.
Solanaceae qoysku waxay waraabisaa xilliga koritaanka. Hagaajinta 10 mitir oo laba jibbaaran. m maqan 2 litir oo xal ah.
Dhirta ornamental iyo baadiyaha waxaa lagu daaweeyaa kahor iyo kadib ubax. Xalka shaqadu wuxuu ku jiraa ilaa 2 litir 10 mitir oo laba jibbaaran. m
Waa muhiim! Tan iyo ugu badnaan waxtarnimada daroogada ayaa lagu muujiyey saacad ka dib daaweynta ka dib, waa mid aad muhiim u ah in la doorto waqtiga saxda ah si inta badan cayayaanka ay waxyeeleeyaan.
Saamaynta ugu sareysa, caleemaha waxaa loo shaqeeyaa si siman. Dhirta la buufiyo oo keliya ee cimilada deggan. Waad ku celin kartaa 14 maalmood kadib.
Baakada wax soo saarka Iskra ee loogu talagalay ilaalinta cayayaanka xayawaanka, fasalka 3aad ee khatarta ayaa la tilmaamay. Sidaa daraadeed, si loo ilaaliyo caafimaadkaaga, waxaa lagula talinayaa in aad isticmaasho qalabka ilaalinta shakhsiyeed, neefsashada, dharka ilaalinta iyo muraayadaha caaga ah ee caag ah. Waa muhiim markaad shaqeyneyso inaadan cabin ama cunin cunto. Marka la dhammeeyo daaweynta, si fiican u nadiifi maqaarka iyo xuubka xabka ee afka afka.
Cawaaqib xumada ka dib marka lala xiriiro daroogada ayaa laga yaabaa inay u muuqato natiijo aan ku hoggaansanayn xeerarka isticmaalka. Si aad u daran waxyeello jirka, waxaa muhiim ah in isla markiiba la siiyo gargaarka degdegga ah:
Ka dib markaad taabato maqaarka, badeecadda waxaa laga saaraa maro nadiif ah ama suufka oo si fiican loo dhaqo biyo badan iyo saabuun.
Ka dib dhaawaca indhaha, ku dhaq biyo nadiif ah. Waxaa lagula talinayaa inaad indhahaaga ku hayso waqtigan.
Haddii daroogada la liqay, waxaad u baahan tahay inaad cabto dhowr koob oo biyo ah oo lagu daro dhuxusha dhaqdhaqaaqa. Waxaa lagu talinayaa in la qaato ilaa 5 kiniin ah 1 koob. Kadibna si toos ah u matag matag oo isla markiiba u qaad bukaanka dhakhtarka.
Ma taqaanaa? Maanta kaneecada ugu khatarta badan waa DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane). Waxaa la helay 1937-kii cilmi-baare P. Muller, oo ku guuleystay abaalmarinta Nobel Prize.
Ka dib markii gargaarka degdegga ah, waa lagama maarmaan inaad la xiriirto xarun caafimaad si aad u hesho talo. Inta badan, dhakhaatiirtu waxay qoraan aafooyinka.
Xaaladaha mudada muddada iyo kaydinta
Ku keydi daaweynta kaliya ee qallalan, meel adag oo mugdi ah heerkulku ka yimid -10 ilaa +30 ° C. Waxaa muhiim ah in daroogada aan la heli karin carruurta iyo xayawaanka. Nolosha shafka ah waa in aysan aheyn wax ka badan 2 sano.
Tan iyo, waqti ka dib, cayayaanka horumarinta xasaasiga ah ee maaddooyinka firfircoon ee diyaargarowga, waxaa lagula talinayaa in cayayaanka kale ee cayayaanka. Waxaa jira barakooyin lagu kala doorto, halkan waxaa ku yaalo qaar - Aktell, Decis, Karbofos, Fitoverm, Calypso, Aktar.
Sida laga soo xigan karo macluumaadka kor ku xusan, Qalabka Dib-u-eegista Dhoofinta Labaad wuxuu qabaa waqtiyo kala duwan, taas oo macnaheedu yahay in ay aad u muhiim tahay inaan la seegin si loo helo natiijada ugu sareysa. Kaliya kiiskan, cayayaanka ma awoodi doonaan inay waxyeelo weyn u geystaan ​​dhirta, iyo goosashadaada waa la badbaadin doonaa.